त्रिवि उपकुलपतिमा पहिलोपटक २ चिकित्सक सिफारिस, डा. कोइराला र डा. बास्कोटामा कसको पल्ला भारी ? – Health Post Nepal
त्रिवि उपकुलपतिमा पहिलोपटक २ चिकित्सक सिफारिस, डा. कोइराला र डा. बास्कोटामा कसको पल्ला भारी ?
२०७६ असोज १७ गते १८:३२
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपतिमा पहिलोपटक २ चिकित्सक सिफारिसमा परेका छन् । त्रिविका सहकुलपति एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले बिहीबार कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सिफारिस गरेका ३ नाममध्ये २ जना चिकित्सक परेका हुन् । दुवै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतका प्राध्यापक हुन् । यसअघि ५ भदौमा निवर्तमान उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँको पदावधि सकिएसँगै त्रिविको उपकुलपति पद रिक्त छ । त्यसयता तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
सिफारिसमा पर्नेमा प्रा.डा. भगवान् कोइराला, प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटा र प्रा. चन्द्रमणि पौडेल छन् । सिफारिस ३ जनामध्ये कुनै एकलाई कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइराला सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीका संस्थापक निर्देशक हुन् । उनले केही समयका लागि त्रिवि आइओएमअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि सबैभन्दा योग्यतम व्यक्तिका रूपमा हेरिएका डा. कोइरालाले सिफारिस समितिले खोलेको दुवै विज्ञापनमा आवेदन भने दिएनन् ।
अर्का वरिष्ठ चिकित्सक डा. बास्कोटा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हुन् । आइओएमअन्तर्गत नै प्राध्यापक रहेका डा. बास्कोटा यसअघि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि समेत चर्चामा थिए । उनी त्रिवि उपकुलपतिमा इच्छा जाहेर गर्दै आयोगमा नगएको बताइएको छजाहेर गर्दै आयोगमा नगएको बताइएको छ ।
सिफारिसमा परेका अर्का उम्मेदवार प्रा. पौडेल त्रिविका पूर्वकुलसचिव हुन् । यसअघि उनी तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट रजिस्ट्रार नियुक्त भएका थिए । हाल उनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । बोर्डमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा मन्त्री पोखरेलले आफूनिकटका उनलाई पनि उपकुलपतिमा सिफारिस गरेका हुन् ।
डा. कोइराला र डा. बास्कोटामा कसको पल्ला भारी ?
चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षका लागि योग्यतम (निर्विकल्पजस्तै) उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि त्यसमा अनिच्छा देखाएका डा. कोइरालाको नाम त्यतिवेलैदेखि उपकुलपतिमा चर्चामा छ । योग्यतम चिकित्सकका साथै आफूलाई कुशल प्रशासकका रूपमा समेत दुईपटकसम्म प्रमाणित गरिसकेका डा. कोइरालालाई सिफारिसमा परेका तीनमध्ये प्रमुख उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । डा. कोइरालाकै ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा स्थापित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई उनले स्थापनादेखि अब्बल मुटुरोग अस्पतालका रूपमा स्थापित गराउन कुशल नेतृत्व दिएका थिए । आइओएममा आएपछि पनि उनले छोटो समय टिचिङको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई अब्बल प्रशासकका रूपमा प्रमाणित गरेका थिए । टिचिङअन्तर्गतकै मनमोहन कार्डियो भास्कुलर सेन्टरको स्थापना र विकासमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
उपकुलपति नियुक्तिकै सिलसिलामा शिक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीसित समेत भेट गरी छलफलमा सामेल भइसकेका डा. कोइरालालाई उपकुलपति नियुक्तिकै लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको अनुमान लगाइएको छ । मुलुककै उच्च शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको त्रिवि पछिल्लो समय चरम राजनीतीकरण, अराजकता र भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त र खोक्रो बनिसकेको छ । यस अवस्थामा राजनीतिसँगै प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने डा. कोइरालाले त्रिविलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने आशा धेरैको छ । उनले पनि नेतृत्व आफ्नो हातमा आएको खण्डमा त्रिविलाई राजनीतिक अखाडाबाट मुक्ति दिलाई पूर्णतः प्राज्ञिक छवि स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनको यो इच्छाशक्तिमा यसपटक सरकारले पनि भरोसा गर्न खोजेको संकेत देखिएको छ ।
डा. बास्कोटा पनि उपकुलपतिको रेसमा कमजोर भने छैनन् । उनलाई उपकुलपति बनाउनकै लागि चिकित्साशिक्षा आयोगमा नलगिएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । काउन्सिललाई नेतृत्व दिइसकेका डा. बास्कोटा निकै अघिदेखि उपकुलपतिको दौडमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । डा. कोइरालालाई बनाउँदाभन्दा डा. बास्कोटालाई बनाउँदा सत्तारूढ नेकपा र त्यसनिकट विद्यार्थी संगठन तथा त्रिविअन्तर्गतका प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनहरूले उपकुलपतिबाट बढी राजनीतिक लाभ लिन सक्ने भएकाले उनलाई बनाउन पनि नेकपाभित्र ठूलै समूह लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
समग्रमा सिफारिस गरिएका ३ नाममध्ये उपकुलपति सम्भावना २ चिकित्सककै बढी भएको विश्लेषण गरिएको छ । दुईमध्ये पनि डा. कोइराला केही अघि रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि पनि त्रिविको नेतृत्व चिकित्सकले सम्हालेको इतिहास छ । राजाको पालामा डा. गोविन्द शर्मा पनि त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा ल्याइएका थिए ।